﻿4Soft Skills Every Top Executive Has ﻿
4 Soft Skills Every Top Executive Has
ထိပ်တန်း Executive တိုင်းတွင် ရှိနေတဲ့ Soft Skill (၄) ခု
ထိပ်တန်း Professional တိုင်းအတွက် Soft Skill များဟာ Technical Knowledge များကဲ့သို့ပင် အလုပ်တစ်ခုကို ရရှိနိုင်ဖို့နဲ့ အဆိုပါအလုပ်နေရာကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Accountant တစ်ဦးဟာ စာရင်းအင်းများကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာကို သိရှိဖို့လိုအပ်သလို၊ Marketing သမားတစ်ဦးဟာလည်း ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးနည်းဗျူဟာများကို မည်ကဲ့သို့ ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကို သိနေဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် . . . ထိုကဲ့သို့သော Technical Skill များအပြင် ဥပမာအားဖြင့် သင့်အနေနဲ့ ဘဏ်တစ်ဘဏ်သို့ သွားရောက်ရတဲ့အခါ ဘယ်ဝန်ထမ်းကိုသင်ပိုပြီးချဉ်းကပ်လိုစိတ်ရှိပါသလဲ? ဘယ်သူကတော့ စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ အချိန်ယူပြီး သင့်ရဲ့အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးလေ့ရှိပြီး ဘယ်သူကတော့ သင့်ကို သူတို့လုပ်ပေးစရာမလိုတဲ့အရာတွေကို လုပ်ပေးနေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ဆံလေ့ရှိပါသလဲ? ကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီး မိမိတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုလည်း စိတ်အားတက်ကြွမှုရှိလာစေတဲ့သူများကသာ သူတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ရာထူးနေရာနဲ့ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအတွင်း တောက်ပြောင်ထူးချွန်မှုရှိလာမယ့်လူများပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင် Soft Skill များကသာ ပို၍အရေးပါမှုရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုက Soft Skill များစွာကို သူတို့ရဲ့ CV ပေါ်တွင် ထည့်သွင်းရေးသားထားလေ့ရှိသော်လည်း ရိုးရှင်းတဲ့ Personality Test များဖြင့် ၎င်းတို့ရဲ့ Soft Skill များဟာ အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်မှု ရှိ/ မရှိကို စစ်ဆေးစမ်းသပ်၍ရနိုင်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ Soft Skill များကို မွေးမြူလေ့ကျင့်ထားနိုင်ပါက စာဖတ်သူတို့အနေနဲ့ မည်သည့်နေရာတွင် အလုပ်ဝင်လုပ်သည်ဖြစ်စေ ကောင်းမွန်တဲ့ရလာဒ်များကို ရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောသူများအနေနဲ့ ဒီအမူအကျင့်လက္ခဏာများဟာ မွေးကတည်းကပါလာတဲ့အရာများဖြစ်တယ်လို့ ထင်နေနိုင်သော်လည်း - ဒီအရာများကို သင်ယူမှုပြုလုပ်၍လည်းရနိုင်ပါတယ်။
ထိပ်တန်း Executive တိုင်းတွင်ရှိနေသော Soft Skill များ -
ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်မှုစွမ်းရည် - ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးထံတွင် “ဦးဆောင်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန်” လိုအပ်မယ့်အရည်အချင်းများရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့သူများဟာ ပြီးပြည့်စုံ၍ ကောင်းမွန်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူများဖြစ်ကြပြီး သူတို့ဟာ - လူအများနဲ့ မည်သို့အလုပ်လုပ်ရမလဲ၊ ထိုသူတွေကို ဘယ်လိုဦးဆောင်ရမလဲ၊ Team များကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်၍ ဘယ်လို Motivate ဖြစ်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးရမလဲ ဆိုတဲ့အချက်တွေကို ကောင်းစွာသဘောပေါက်ထားသူများဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ရှိ ထိပ်တန်းအိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရေး ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Barbara Ann Corcoran ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုအရ “လူများဟာ မိမိတို့နှစ်သက်တဲ့သူများနဲ့သာ လက်တွဲ၍လုပ်ကိုင်လိုကြလေ့ရှိပါတယ်။ အကယ်၍ အခြားသူများက သင့်ကိုနှစ်သက်မှုရှိနေပါက သင်နဲ့အတူ လုပ်ငန်းများလက်တွဲ၍လုပ်ကိုင်လိုကြမှာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့က သင့်ကိုနှစ်သက်မှုမရှိနေဘူးဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ အလွန်ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲများကို ကျော်ဖြတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။” လူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေစွာပေါင်းသင်းတတ်သူတစ်ဦးဖြစ်နေခြင်းက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလောကတွင် သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးလှပါတယ်။
တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် ယုတ္တိရှိစွာ တွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်တတ်မှုစွမ်းရည် - တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ဆိုတာကို ကန့်သတ်ဘောင်အပြင်မှ တွေးခေါ်တတ်ခြင်း (Thinking Outside The Box) ဟူ၍လည်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်တွင် လူတိုင်းဟာ မိမိတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လည်ပတ်မှုရှိနေစေရေးအတွက် တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်များကို လိုအပ်လာပါပြီ။ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်ရာတွင်၊ ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရာတွင်နှင့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဖန်တီးရာတွင် အများနဲ့မတူပဲ ထူးခြားတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိပ်တန်း Executive များအနေနဲ့လည်း အချိန်နဲ့အမျှ တွေးခေါ်မှုများကိုပြုလုပ်နေဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက် သူတို့ကဲ့သို့လိုက်ပါလုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်သူများကို recruitment ပြုလုပ်၍ ခေါ်ယူလျှက်ရှိနေပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ “ဖိအားများအောက်တွင် သင့်အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား?” ဟူ၍ မေးမြန်းလာနိုင်ပြီး Critical Thinking ကောင်းမွန်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ သင်ဟာ ပြဿနာများကို လေ့လာ၍ ကောင်းမွန်မှုရှိတဲ့ ဖြေရှင်းပုံနည်းလမ်းများကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Critical Thinking ကောင်းမွန်သူများဟာ ညှိနှိုင်းပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရလွယ်ကူတဲ့သူများလည်းဖြစ်ပြီး ပုံသေအတွေးအခေါ်ထဲမှာပိတ်မိမနေပဲ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်းပုံနည်းလမ်းများကို လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ရန် ဝန်မလေးတဲ့သူများလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။
စာနာမှုနှင့် ကိုယ်ချင်းစာတရား - လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ပြဿနာများနှင့် အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းခြင်းဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူများရဲ့ ခံစားချက်ကိုနားမလည်ပါက သင့်အနေနဲ့ သူတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုးရွားဆုံးသောထုတ်ကုန်များဆိုသည်မှာ ၎င်းတို့ကိုထုတ်လုပ်ပေးသူများမှ အသုံးပြုသူများနဲ့ သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝများကို ကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်မှုမရှိကြတဲ့အတွက် ပေါ်ထွက်လာတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ပြင်ပရှိ သုံးစွဲသူများကို ကိုယ်ချင်းစာတရားထားရှိရမည်သာမက ရုံးတွင်းရှိဝန်ထမ်းများအပေါ်တွင်လည်း ကိုယ်ချင်းစာတရားထားရှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဝန်ထမ်းများရဲ့ လိုအပ်ချက်များနဲ့ ၎င်းတို့လိုချင်တဲ့ အရာများကို နားလည်သဘောပေါက်မှုရှိပါသလား? ၎င်းတို့ထံတွင် ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ အခြေအနေများကို စာနာနားလည်ပေးနိုင်မှုရော ရှိပါသလား? ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီကြီးများတွင် အလွန်များပြားတဲ့လစာငွေမျိုးကို ပေးထားတာကြောင့်မဟုတ်ပဲ ၎င်းတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းများကို ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံလေ့ရှိကြတဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းထွက်ခွာမှုနှုန်းဟာ အနည်းဆုံးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည် - ဒါဟာ Executive တိုင်းနဲ့ Professional တိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ ဖိအားများစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရစဉ်မှာပင် “ခေါင်းဆောင်မှုများကို” ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားနိုင်သူများဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအရာက အပြောနဲ့တော့ လွယ်ကူလှပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်းမှာ လိုက်လံလုပ်ဆောင်ရခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီအရည်အချင်းဟာ မွေးကတည်းက ရရှိနိုင်တဲ့အရည်အချင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ မိမိကိုယ်ကို ထပ်ကာထပ်ကာ သတိပေး၍ လေ့ကျင့်မှုများကို ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ စွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်သူတစ်ဦး ဖြစ်နေဖို့အတွက် Soft Skill တိုင်းနဲ့ Techincal Skill တိုင်းကို သိရှိထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်သော်လည်း အချို့သော ခေါင်းဆောင်များထံတွင် လိုအပ်တဲ့ Technical Skill တိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း အလုပ်ကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိနေကြတဲ့အတွက် အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ သင့်တော်တဲ့ Soft Skill များကို ပိုင်ဆိုင်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ Technical Skill (Hard Skill) များ အားနည်းမှုရှိတဲ့ နေရာများတွင် Soft Skill များက အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပြီး မည်သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် ဖြစ်စေကာမူ ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လည်း သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ Executive များထံမှ ကောင်းမွန်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်၊ ရိုးသားစွာဆက်ဆံခြင်းနှင့်၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ရလာဒ်များကို ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ဖို့အတွက် ၎င်းတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ အစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲနိုင်စွမ်းရှိနေဖို့ကိုပဲ မျှော်လင့်တတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။